ရက်စက်မှုအပေါင်းသရဖူဆောင်းခဲ့ပြီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Contributors » ရက်စက်မှုအပေါင်းသရဖူဆောင်းခဲ့ပြီ
Posted by DEPARKO DEPARKO on Sep 21, 2012 in Contributors, Copy/Paste | 17 comments
တစ်လောက ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ ပြစ်မှုဂျာနယ်ဝယ်ဖတ်ကြည့်မိတယ်။ ဆက်မဖတ်ရဲတော့တာနဲ့ အောက်ချ (ငယ်စဉ် ကြောက်စရာကားများကြည့်ရသလိုခံစားရပါတယ်) ခေတ္တတွေးတော ပြီးမှဆက်ဖတ်ကြည့်မိပါတယ်။ မှုခင်းသတင်းတွေတော်တော်များများဟာ မကြားဝံ့မနာသာ ရက်စက် ယုတ်မာပုံတွေ ကိုယ့်သွေးသားရင်း ဖိုးအေက အရွယ်မရောက်သေးတဲ့မြေးငယ်ကို၊ အရက်သမားက၅နှစ်အောက်ကလေးငယ်ကိုလူမဆန်စွာ၊ MRTV4 မှအသက်နှစ်ဆယ်ကျော်ကောင်မလေးက အသက်၁၈နှစ်အရွယ် အိမ်ဖေါ်ကို ရက်စက်စွာအသက်သေအောင်နှိပ်စက်တာတွေ ဒီဘက်ခေတ်မှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မြန်မာလူမျိုးလို့ ပြောရမှာရှက်စရာကောင်းအောင်ကို မှုခင်းတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီကြားထဲ မြောက်ပိုင်းကအဖြစ်အပျက် ကိုဖတ်လိုက်ရတော့။ သီပေါမင်းနန်းတက်ဘို့ မင်းညီမင်းသားတွေ ၀ါးရင်းဒုတ်နဲ့လည်မျိုရိုက်သတ်တဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေဟာ မြန်မာ့သမိုင်းမှာအမည်းစက်ကြီးထင်ကျန်ခဲ့ဘူးသလို အခု မှုခင်းတွေဟာလည်း မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ရက်စက်မှုသမိုင်းမှတ်တိုင်တွေဖြစ်ကျန်နေရစ်ခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ငယ်ရွယ်စဉ်က သွေးသံရဲရဲ ဆိုရင် ရုပ်ရှင်ကို ဆက်မကြည့်ရတော့ဘဲ အောက်ကိုငုံ့နေရတာ တစ်ခါတစ်လေ ဇါတ်ကားအရသာတောင်မသိလိုက်ရပါဘူး အခုခေတ် ကလေးငယ်တွေဟာ သူရဲကား၊ လူသတ်ကား၊(ရက်စက်စွာ အပိုင်းပိုင်းအတစ်တစ်ခုတ်ထစ်ဖြတ်တောက်) လက်စားချေလူသတ် ကားတွေကို ခုံမင်စွာ ကြည့်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ် တစ်ချိန်က နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေမှာ family show / မိသားစုကလေးငယ်ပါကြည့်ခွင့်ရ၊ R အတန်းအစား ၁၆နှစ်အောက်မကြည့်ရ X အတန်းအစား ၁၈နှစ်အောက်မကြည့်ရ လို့ပိတ်ပင်ထားပြီး အရက်/ဆေးလိပ်ကို ၁၈နှစ်အောက်တွေကိုမရောင်းရဘူးလို့သိရပါတယ်။
အခု မြန်မာပြည်မှာ ဆယ်နှစ်သားလေးကလည်း လက်ကြားမှာ ဆေးလိပ်နဲ့ ဆယ်ကျော်သက်တွေ(၁၅နှစ်အောက်) တွေကလည်းမူးရစ်ဝေသီလို့ မိန်းကလေးတွေ ပိုဆိုးသေး ကိုရီးယားကားတွေကြည့် အဲဒီအထဲကဇါတ်ကောင်တွေအတိုင်း ၀တ်စားဆင်ယင် အတုခိုးလို့ မိန်းကလေးတွေကလည်းမူမူးနဲ့ ——အင်း—-
ဒီတော့ ရက်စက်ရိုင်းစိုင်းကြမ်းကြုပ်လာကြတာ လူမဆန်တဲ့မှုခင်းတွေ အင်တာနက်ပေါ်မှာလည်း နိုင်ငံခြားကအရှုံးပေးရလောက်တဲ့အပြာဇါတ်လမ်းတွေ —အင်း—-
သူကြီးရေ နောက်ဘ၀ကြရင် ဘာလူမျိုးအဖြစ်ဆုတောင်းရရင်ကောင်းမလည်း အကြံလေးပေးပါဦး
ဘယ်ဘုံဘ၀ မှ မရောက်ချင်တော့ဘူးကွယ်…….
သူများတွေကိုကြည့်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆင်ဆင်ခြင်ခြင်နေရင် ဘာမှဆုတောင်းစရာမလိုပါဘူး
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာက နျူကလီးယားမတီထွင်ဘဲ မမေ့မလျှောသောသတိနဲ့နေကြလို့ မှာခဲ့တာ ထင်တယ်
ဖြစ်လေရာဘဝမှာ အဆင်ပြေသလိုသာနေထိုင်ကြရပေတော့မည် ။
ဒါ တို့ပြည် ။
အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် အခုတော့ ဂျာနယ်ဝယ်ရင်တာင် စိတ်ညစ်စရာတွေပါတဲ့ အကြောင်းအရာတွေပါမယ်လို့ထင်ရင်မ၀ယ်ဖြစ်တော့ပါဘူး
တယောက်ထဲ.. လောလောဆယ်အဖြစ်တွေ..ရှောင်ပြေးပြီး.. နောင်ဘ၀လွှဲချ.. သုံးကိုယ်မခွဲလိုက်ပါနဲ့..
မြန်မာပြည်ထဲ.. Rating စနစ်တွေအသက်ဝင်လာအောင်လုပ်ပေးပါ..
ကိုရင်မြန်မာပြည်ထဲ.. Rating အဆင့်တွေ.. မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့..ကိုက်ပြီး..ပြန်ဆွဲမယ်.. လုပ်မယ်ဆိုရင်.. ကျုပ်လည်းအားပေးတယ်..။
သဂျီးရေ သူတို့(လူတတ်ကြီးများ)ပြောသလိုပေါ့ ဒီမိုကရေစီနဲ့မတန်သေးဘူးဆိုဘဲ အဓိကကျတဲ့ လွတ်လပ်တာနဲ့ စည်းကမ်းရှိတာ တစ်ခြားစီပါ ကိုယ့်လူမျိုးရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ မကောင်းမှုပြုလုပ်ရန် ရှက်ခြင်းကြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ လောကပါလတရားတွေကို ကလေးဘ၀ကထဲက သင်ကြားပို့ချတဲ့ စနစ်တစ်ရပ်ပြန်အသက်သွင်းဘို့လိုတာပေါ့။ ဟိုဘက်ခေတ်က ကလေးတွေကို မနက်ဘုရားစာဆိုတာတို့ သားသမီးဝတ်။မိဘ၀တ်။ဆရာဝတ်၊တပည့်ဝတ်လိုမျိုး ကလေးတွေစိတ်ထဲ တစ်ခါတည်းရိုက်သွင်းနိုင်မည့် စနစ်တစ်ရပ်ပြန်ပြဌာန်းဘို့လိုတယ်လေ။
ကွန်ဆာဗေးတစ်ဖြစ်ကြ.. ရှေစွန်းစွဲလွန့်လွန်လွန်းနေပါတယ်ဆိုမှ… နောက်လာမယ့်မျိုးဆက်တွေပါ.. အစ္စလမ်မစ်တိုင်းပြည်ကလူတွေလို ဖြစ်အောင်.. လုပ်နေပြန်ပါပြီ…
ရွှေတိဂုံစေတီအထက်ပစ္စယံပေါ်ပါတက်ရရင်.. “သိဒ္ဓိမဟိ” ဘွဲ့ကိုနာမယ်ရှေ့မှာ ခံပေးမယ်ပါလုပ်လိုက်…
မကောင်းလား…. ” သိဒ္ဓိမဟိဒီပါကို”ခင်ဗျ…
(မှတ်ချက်… မိန်းမ, ရှေးကထဲက..အထက်ပစ္စယံတက်ခွင့်မရသဖြင့်… ဘွဲ့ခံရမည်စာရင်းတွင်.. မပါ… )
ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကိုပြောတာလေ ဒါလဲဒီမိုကရေစီဘဲ ဟာဘဲဟာဘဲကို
ကျုပ်ကိုဆို.. ပြန်ပြောခွင့်သာမက.. ဆဲခွင့်ပါပေးထားတာပဲ..ဟာပဲ..ဟာကို..
( ဘလိုင်းကြီးတော့. .မဆဲနဲ့ပေါ့နော.. လိမ်မာပါတယ်.. နော..နော… )
လူဆို အသိဥာဏ်အမြင့်ဆုံးသတ္တ၀ါပါ ဒီလိုရိုင်းစိုင်း ရက်စက်ကြမ်းကြုပ်လာတာဟာ ဆင်ခြင်တုံ့တရား နဲ့ဘာသာရေးကိုင်ရှိုင်းမှုနည်းလာတာရယ် ဥပဒေဆိုတာကို ကြောက်ရမှန်းမသိတာရယ်ကြောင့်လို့ ထင်ပါတယ်